बीबीसी मिडिया एक्सनबारे भ्रम र यथार्थ - Karobar National Economic Daily
बीबीसी मिडिया एक्सनबारे भ्रम र यथार्थ
query_builderJuly 21, 2017 1:20 PM supervisor_accountरमेश घिमिरे visibility742
गरिब मुलुकका आर्थिक–सामाजिक समस्या कसरी कम गर्ने भन्नेबारेमा दाताहरूले विभिन्न विकास मोडलको प्रतिपादन र प्रयोग गर्दै आएका छन् । अविकसित मुलुकका सरकारले दातासँग बढीभन्दा बढी बजेटरी सहयोग र भौतिक पूर्वाधार माग गर्छन् । तर, सुशासन नभएका सरकारलाई बजेट दिन दाताहरू सहजै तयार हुँदैनन् ।
सामाजिक पुँजी र आधार तयार नभई गरिने भौतिक विकास न दिगो हुन्छ, न त्यसले जनतामा न्याय प्रदान गर्छ । त्यसैले दाताहरूले सामाजिक पुँजी निर्माण र आधार निर्माणमा जोड दिने गरेका छन् । दाताहरूले भौतिक निर्माण अर्थात् हार्डवेयर विकासभन्दा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने विधि, प्रक्रिया, कानुन, जनचेतना र सशक्तीकरण गर्ने अर्थात् सफ्टवेयर विकासमा जोड दिन्छन् ।
आमसञ्चार माध्यम र नागरिक सशक्तीकरणलाई संयोजन गरेर गरिब मुलुकमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने विकासको नयाँ मोडल अहिले प्रयोगमा आएको छ । त्यही मोडलअन्तर्गत नेपालमा पनि बीबीसी र दाताहरूको सहकार्यमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ।
सैमध्येको एउटा बीबीसी साझा सवालमा हालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग गरिएको प्रश्नोत्तरले वादविवादको सिर्जना ग¥यो ।साझा सवाल बीबीसी मिडिया एक्सनको नेपाली कार्यक्रम हो ।
नेपालमा यसका दर्शक ६६ लाख पुगेको बताइएको छ । अति कम विकसित एसियाली र अफ्रिकन मुलुकलाई लक्षित गरी बीबीसी मिडिया एक्सनले सम्बन्धित मुलुकअनुकूल हुने नाम राखेर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सबै मुलुकमा गरी यसका दर्शक २० करोड पुगेको बताइएको छ । नेपालमा बीबीसी मिडिया एक्सनको मिलीजुली नेपाली र कथा मीठो सारङ्गी पनि छन् ।
साझा सवालमा प्रधानमन्त्रीसँग गरिएका प्रश्नको विषयवस्तु र शैलीलाई लिएर मानिसहरूले तर्क–वितर्क गर्ने क्रम व्यापक भयो । त्यसमध्ये चर्चामा रहेका प्रमुख बुँदा यस्ता थिए :
१. शेरबहादुर देउवा मिडियासँग बोल्न जान्दैनन् । लाखौं मानिसले एकैपटक हेर्ने र सुन्ने कार्यक्रममा उनलाई जान सल्लाह दिने दोषी हुन् । उनले पार्टीबाट वा सरकारबाट अर्को नेता पठाउनुपथ्र्यो ।
२. सम्मानित प्रधानमन्त्रीलाई कार्यक्रम सञ्चालिका र सर्वसाधारणबाट जुन शब्द र शैली प्रयोग गरेर प्रश्न गरियो, त्यो प्रधानमन्त्रीलाई बेइज्जत गर्न नियोचित रूपले गरिएको कार्य थियो ।
३. यो कार्यक्रमबाट साझा सवालकी सञ्चालिका स्वयम्ले मर्यादा उल्लंघन गरेर इज्जत गुमाएकी छिन् ।
४. जनताका तर्फबाट जस्ता पनि प्रश्न आउन सक्छन् । त्यसको उत्तर दिंदा रिसाउनु प्रधानमन्त्रीको दोष हो ।
५. शेरबहादुर अरूले जस्तो घुमाएर र झूटोलाई सत्य बनाएर उत्तर दिन जान्दैनन् । त्यसैले उनको प्रस्तुतिले नेपालको वास्तविकताको यथार्थ चित्रण भएको छ ।
६. अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई विकासको मुद्दामा सीमित गरिनुपर्छ । यसरी राजनीतिक विषयमा बहस गराउने कार्यलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।
बीबीसी, डिफिड (बेलायती सहयोग नियोग), यूएसएड (अमेरिकी सहयोग नियोग) र संयुक्त राष्ट्रसंघका एजेन्सीहरूको उद्देश्यप्रति नै विमति हो भने यो इपिसोडलाई लिएर विरोध गर्नु पूर्वाग्रही देखिन्छ । किनकि शेरबहादुरलाई जस्तै प्रश्न साझा सवालमा यसअघि सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई सोधिएको थियो । फरक यति हो कि अरूले जवाफ दिने र शेरबहादुर देउवाले जवाफ दिने शैली भने फरक थियो ।
शेरबहादुर सार्वजनिक प्रश्न सामना गर्ने ठाउँमा जानै हुँदैनथ्यो भन्ने तर्क जनता झुक्याएर, ठगेर राजनीति गर्नुपर्छ भन्नेका लागि मात्र उपयुक्त हो । शेरबहादुर देउवाले गरेका कार्यको जवाफ उनका प्रवक्ताले मात्र दिएर पुग्दैन । संसद्मा त उनले जवाफ दिनैपर्छ । उदार लोकतन्त्रका अवगुणलाई कमजोर बनाउने हो भने सर्वसाधारण जनताका प्रश्नको पनि प्रत्यक्ष जवाफ दिनुपर्छ ।
बीबीसीले शेरबहादुर देउवाको मात्र होइन, देशकै बेइज्जत गराउने रणनीतिअन्तर्गत उक्त इपिसोड तयार गरेको हो भन्ने आरोप पनि लगाइएको छ । यो आरोप आँखा चिम्लेर देउवाको समर्थन गर्नेहरूले देउवाको असली रूप बीबीसीका कारण सार्वजनिक भयो भनेर कुण्ठा व्यक्त गरेको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ ।
बीबीसी मिडिया एक्सनले नेपाललगायतका मुलुकमा घोषित रूपमै राजनीतिक प्रश्नोत्तर (पोलिटिकल डिबेट) कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । उसले जातीय, धार्मिकलगायतका विविधतालाई महŒव दिएर समावेशी विकासको अवधारणाअनुरूप विकासोन्मुख मुलुकमा विकासको आधार तयार गर्न यो कार्यक्रम गरेको भनेर आफ्नो विधानमा प्रस्टै लेखेको छ ।
बीबीसी मिडिया एक्सन डाइभरसिटी स्ट्राटेजी (विविधता रणनीति) २०१५–१६ सार्वजनिक गरेरै बीबीसीले सहयोग कार्यक्रम गरिरहेको छ । बीबीसी मिडिया एक्सनले ‘नेपालमा राजनीतिक छलफल कार्यक्रमले राजनीतिक सहभागितामा कति प्रभाव पा¥यो ः एक मुद्दा अध्ययन (केस स्टडी)’ भनेर प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ ।
बीबीसी मिडिया एक्सन बेलायती सार्वजनिक सञ्चार संस्था बीबीसी विश्व सेवाको विकास एजेन्सीका रूपमा स्थापना भएको छ । बीबीसी मिडिया एक्सनले विकासशील मुलुकमा सहयोग गरिरहेका दाताहरूले आफ्नो कार्यक्रममार्फत सहयोग परिचालन गर्नुपर्ने मान्यता राखेको छ । सोहीअनुसार दाताहरूले बीबीसीमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग गरिरहेका छन् ।
आफ्नो मुलुकको विकासका लागि के–कस्तो विदेशी सहयोग स्वीकार गर्ने र के–कस्तो नगर्ने भन्ने अधिकार सार्वभौम मुलुकसँग हुन्छ । तर, सरकार विशेषका कारण कुनै देशका जनता आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन् भने उनीहरूले अन्य मुलुकको सहयोग प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क पनि बहसको विषय छ ।
धेरै मुलुकले विदेशी लगानीमा आमसञ्चार माध्यम खोल्न लगानीको सीमामा कडाइ गरेका हुन्छन् । आमसञ्चारमाध्यमले भावनात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले राष्ट्रियतामाथि असर पार्न सक्छन् भनेर विदेशी लगानीलाई सीमा तोकिएको हुन्छ ।
बीबीसी मिडिया एक्सन नेपाललगायत मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, द्विपक्षीय दाता र अन्तर्राष्ट्रिय आमसञ्चारमाध्यमको संयुक्त नयाँ रूपमा प्रवेश गरेर क्रियाशील भएको छ ।
विकास पत्रकारिता र पैरवी पत्रकारितालाई यूएनडीपीसहित दाता निकायले धेरै पहिलेदेखि आफ्नो प्रोजेक्टअन्तर्गत राख्दै आएका छन् । यसभन्दा धेरै अगाडि बढेर बीबीसी मिडिया एक्सन र दाताको सहकार्य सुरु भएको छ ।
जनतालाई सशक्तीकरण गर्ने र राजनीतिमा सबै जनताको समान प्रभाव पार्ने आफ्नो उद्देश्य रहेको बीबीसीले प्रस्ट पारेको छ । बीबीसीको दस्तावेजमा भनिएको छ, “सूचनामा जनताको पहुँच भएर मात्र सरकारहरू जनताका आवश्यकताप्रति उत्तरदायी हुँदैनन्, त्यसका लागि राज्यशक्तिमा प्रभाव पार्न सक्ने सक्षम जनता निर्माण गर्नुपर्छ, जसका लागि बीबीसी मिडिया एक्सनले कार्य गर्छ ।”
बीबीसीले अन्तर्राष्ट्रिय दाता मात्र होइन, सम्बन्धित मुलुकका आमसञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजसँग मिलेर कार्य गरिरहेको छ । लोकतान्त्रिक शासकीय स्वरूपमा बहुतहको शासन पद्धतिलाई स्वीकार गरिएको छ, जसमा नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई पनि शासनको तह मानिएको छ । यसका आधारमा बीबीसीको उद्देश्य हामीले स्वीकार गरेको मान्न सकिन्छ ।
साझा सवालमा अधिकांश प्रश्न पूर्वनिर्धारित नै हुन्छन् । यो एजेन्डा सेटिङ गरेरै तयार गरिएको मिसन जर्नालिज्म हो । प्रश्न सोध्न प्रश्नकर्तालाई पर्दापछाडि अभ्यास गराइएको हुन्छ । बीबीसीले स्वयम् भनेको छ, “हाम्रो उद्देश्य सरकारी अधिकारीसामु बोल्न नसक्ने व्यक्तिलाई निर्धक्कका साथ प्रश्न गर्न सक्ने बनाउनु हो ।” यसका लागि प्रश्न सोध्नुपूर्व अभ्यास त गराउनैपर्छ ।
अन्त्यमा, हामीले राजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा खुला समाजलाई स्वीकार गरेका छौं । बेलायती शासन पद्धतिलाई आदर्श मानेका छौं । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, स्वतन्त्र प्रेस, मानवअधिकार, लोकतान्त्रिक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यासको स्वीकार्यता हाम्रा आधारभूत राजनीतिक विशेषता हुन् ।
सार्वभौम मुलुकका रूपमा हामीले कुनै पनि रूपका विदेशीलाई दिने स्थान हामीले तोक्न सक्छौं । तर, खुला समाजको बृहत्तर अवधारणालाई स्वीकार गरेका कारण पहिले हामीले सबै सीमालाई खुला राखेर चिन्तन सुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री सामाजिक पुँजी साझा सवाल